Network sy Internet | December 2019
Ny tena fampiantranoana ny VPS ary ny fomba hifidianana mpamatsy azo antoka
Ny fisafidianana ny fanompoana fampiantranoana dia iray amin'ireo dingana lehibe indrindra amin'ny dingana voalohany amin'ny famoronana tranonkala iray. Ireo mpandrindra webmaster dia matetika liana amin'ny tolotra mora vidy, satria voafetra ny tetibolany. Mikasa ny hisafidy toeram-panatanjahantena izy ireo izay hanome ny isam-bolana farafahakeliny tsy misy fandaniana ho an'ny harena tsy ampiasaina.
Mampifanaraka ny router D-Link DIR-620
Wi-Fi router D-Link DIR-620 Ao anatin'ity boky ity dia hiresaka momba ny fomba fametrahana ny router router D-Link DIR-620 hiasa miaraka amin'ireo mpamatsy maro be ao Rosia. Ny torolàlana dia natao ho an'ireo mpampiasa tsotra mila manangana tambajotra tsy misy tambazotra ao an-tokantrano mba hanaovana izany fotsiny.
Mametraka ny Internet amin'ny Wi-Fi router NETGEAR JWNR2000
Tsy maintsy fantatsika fa tsy toy ny D-Link ny router NETGEAR, fa matetika dia misy fanontaniana momba azy ireo. Anatin'ity lahatsoratra ity dia hamakafaka amin'ny antsipiriany bebe kokoa ny fifandraisana amin'ny router NETGEAR JWNR2000 amin'ny ordinatera sy ny fikirakirana azy ho an'ny Internet. Ary dia aoka isika hanomboka ... Mampifandray amin'ny ordinatera sy ny fidirana an-tsehatra Azo antoka fa alohan'ny hametrahanao ny fitaovana, dia mila mampifandray azy marina ianao ary miditra ny fanovana.
Ahoana ny fahatakarana fa misy kaonty hacked ao amin'ny VK: toro-hevitra sy torolàlana mahomby
Ny tambajotra sosialy VKontakte dia tsy afaka ny hiaro tanteraka ny tsirairay amin'ireo mpampiasa azy amin'ny fisintonana ny angona manokana. Matetika ny kaonty dia iharan'ny fanaraha-maso tsy nahazoana alalana. Nandefa solosaina avy amin'izy ireo ny fampahalalam-baovao hafa, nalefa, sns. Ho an'ilay fanontaniana hoe: "Ahoana no ahafantaranao fa ny pejinanao tao amin'ny VC dia nokapohina?
Ahoana ny fanovana ny adiresy MAC ao amin'ny router (kloning, MAC emulator)
Mpisera maro, rehefa mametraka router ao an-trano, manome ny fitaovana rehetra amin'ny Internet sy ny tambajotra ao an-toerana, dia miatrika ny olana mitovy - ny adiresy MAC izay mitarika. Ny zava-misy dia ny mpamatsy sasany, mba hahazoana fiarovana bebe kokoa, dia manoratra ny adiresy MAC an'ny karatra misy anao rehefa manolotra fifanekena momba ny fifanarahana miaraka aminao.
Ahoana ny fandroahana na famafana tranonkala Internet Explorer?
Fiarahabana ho an'ny mpamaky rehetra! Raha raisintsika ny isan'ireo fanombatombana tsy miankina amin'ny navigateur, dia 5% isan-jaton'ny mpampiasa ihany no mampiasa Internet Explorer. Ho an'ny hafa, indraindray dia manelingelina ihany koa izy: ohatra, indraindray dia manomboka tampoka izany, manokatra karazana tabilao, na dia efa nifidy navigateur samihafa aza ianao.
Picozu - maimaimpoana maimaim-poana amin'ny aterineto
Imbetsaka aho no nizara ny lohahevitry ny sary maimaim-poana sy sary maimaim-poana an-tserasera, ary tao amin'ny lahatsoratra momba ny sary tsara indrindra amin'ny aterineto no nanasongadiko ny roa amin'ireo malaza indrindra amin'izy ireo - Pixlr Editor sy Sumopaint. Samy manana fitaovana famoahana sary marobe izy ireo (na eo amin'ny ampahany faharoa amin'izy ireo dia misy famandrihana be dia be) ary manan-danja ho an'ny mpampiasa maro, amin'ny teny Rosiana.
Ny solosaina finday dia tsy mifandray amin'ny Wi-Fi (tsy mahita tambajotra tsy misy tambazotra, tsy misy fifandraisana misy)
Ny olana mahazatra dia matetika no mitranga rehefa misy fanovana sasany: manavao ny rafitra miasa, manolo ny router, manavao ny firmware, sns. Indraindray, tsy mora ny mitady ny antony, na dia ho an'ny tompona za-draharaha aza. Ao amin'ity lahatsoratra kely ity dia te hijanona amin'ny tranga roa aho, izay matetika, ny laptop dia tsy mifandray amin'ny Wi-Fi.
Jereo ny hafainganam-pandehan'ny Internet: fomba fijery iray
Tonga soa! Heveriko fa tsy ny rehetra no sady tsy faly foana amin'ny haavon'ny Internet. Eny, rehefa lany haingana ny lahatsary, sarimihetsika an-tserasera an-tserasera tsy misy fanenjehana sy fahatarana, misokatra haingana ireo pejy - tsy misy ahiahy. Fa raha misy olana, ny zavatra voalohany tokony harahin'izy ireo dia ny manamarina ny haavo amin'ny Internet.
Famoronana router TP-Link (300M Wireless N router TL-WR841N / TL-WR841ND)
Good afternoon Ao amin'ny lahatsoratra mahazatra ankehitriny momba ny fananganana router Wi-Fi an-trano, te-hitoetra amin'ny TP-Link (300M Wireless N router TL-WR841N / TL-WR841ND) aho. Maro ny fanontaniana napetraka amin'ny router TP-Link, na dia amin'ny ankapobeny aza dia tsy misy fahasamihafana hafa amin'ny router maro hafa tahaka izao.
Ahoana no hanovana ny adiresy MAC an'ny router
Ho ahy, vaovao no nahafantarana fa ny mpampiasa Internet sasany dia mampiasa MAC ho an'ny mpanjifany. Ary midika izany fa raha toa ka, araka ny filazan'ilay mpamatsy, dia tsy maintsy mampiasa Internet amin'ny solosaina miaraka amin'ny adiresy MAC manokana io mpampiasa io, dia tsy hiasa amin'ny iray hafa izany - izany hoe, ohatra, rehefa mividy router Wi-Fi vaovao dia mila manome ny data na manova ny MAC adiresy eo amin'ny sehatry ny router.
Ahoana no hanamafisana ny Wi-Fi signal
Raha vao hita ao amin'ny trano (na ny birao) ny tamba-jotra Wireless sy Wireless, dia maro ireo mpampiasa no mifanojo olana mifandray amin'ny fidirana an-tsoratra azo antoka sy ny Internet amin'ny alalan'ny Wi-Fi. Ary ianao, heveriko, fa tiany ny haingam-pandeha sy ny kalitaon'ny fandraisana Wi-Fi ho ambony indrindra. Amin'ity lahatsoratra ity dia hifanakalo hevitra momba ireo fomba maro hanatsarana ny siôsan'ny Wi-Fi aho ary hanatsara ny kalitao momba ny fampitaovana ny tambazotra amin'ny tambanjotra tsy misy tambazotra.
Ny fomba hijerena hockey an-tserasera Rosia Slovakia ary hetsika hafa amin'ny Lalao Olaimpika 2014 any Sochi
Ny hetsika lehibe amin'ny andro farany dia ny Lalao Olaimpika 2014 any Sochi, ary ny iray amin'ireo lalao malaza indrindra amin'ireo mpankafy antsika dia hockey, indrindra rehefa milalao ny lehilahy. Omaly - lalao iray miaraka amin'i Etazonia, ary amin'izao andro izao, 16 Febroary 2014 amin'ny 16:30 - Rosia sy Slovakia (izay efa nandresy tamin'ny fiadiana ny amboara eran-tany farany roa taona lasa izay).
Ampifanaraho ny router Router Asus RT-N12 ho an'ny Beeline + Video
Nandritra ny fotoana lava dia nanoratra ny fomba hampifandraisana ny router Wireless Wireless ASUS RT-N12 ho an'ny Beeline aho, saingy avy eo izy ireo dia fitaovana kely hafa ary nomena tamina andiam-pirafetana hafa izy ireo, ka noho izany dia tsy mitovy ny fandaharam-pandanjana. Amin'izao fotoana izao, ny fanavaozana ny router ASUS RT-N12 ankehitriny dia ny D1, ary ny fikirakirana izay miditra ao amin'ny magazay dia 3.
Ahoana ny fametrahana tenimiafina ho an'ny Wi-Fi amin'ny router'ny Asus
Raha mila miaro ny tambajotra Wireless ianao, dia mora ny manao izany. Efa nanoratra ny fomba fametrahana tenimiafina amin'ny Wi-Fi aho, raha manana router D-Link ianao, amin'ity indray mitoraka ity dia hiresaka momba ny router malaza toy izany - Asus. Io fitaovana io dia mitovy ihany koa ho an'ireo router Wi-Fi toy ny ASUS RT-G32, RT-N10, RT-N12 ary ny ankamaroan'ny hafa.
30 mahaliana indrindra ny fikarohana Yandex sy Google
Efa mba nieritreritra ny zavatra liana amin'ny olona ve ianao ary inona ny fampahalalana azony hitadiavana amin'ny Internet? Nanangona ireo karazana fikarohana lalina indrindra ao Yandex sy Google izahay. Angamba ireo fanontaniana ireo dia miahy ny maro. - - - - Angamba, na i Yandex aza dia tsy hanampy amin'ny tranga toy izany. - - Ny zava-mitranga sy ity ... - - - - Oh, io henjana Chelyabinsk io.
Ahoana no ahafantarana ny mombamomba anao amin'ny mpiara-mianatra ary nahoana no ilaina izany
Ny pejinao ao amin'ny tranonkalan'ny Odnoklassniki dia manana sariohatra toy ny ID izay misy tarehimarika. Nahoana izy no mila izany? - Voalohany indrindra, mba hamerenana amin'ny laoniny ny pejy misy anao, raha misy hacked na hadinonao ny tenimiafinao. Na izany aza, ahoana no ahafantarana ny IDanao, raha tsy afaka mandeha any am-pianarana ianao? Hiresaka momba izany isika, raha ny marina dia tsy misy zavatra sarotra eto.
Fomba hahitana ny taratry ny fifandraisanao amin'ny MTS amin'ny fomba isan-karazany
Ny fepetra sy ny fahamaroan'ny fandoavam-bola, ny fepetra misy, ny fepetra fanompoana ary ny famerenana amin'ny hafa dia miankina amin'ny fampiasana ny karatra. Tena ilaina ny fahafantarana fa ilaina izany, ary ankoatra izany, ny fomba fitsaboana ny tolotra misy dia maimaim-poana, anisan'izany ireo mpandray anjara ao amin'ny MTS. Andininy Ahoana no hamantarana ny findainao sy ny Internet ao amin'ny MTS Fanatanterahana ny baiko Video: ahoana no hamaritana ny sanda amin'ny laharan'ny MTS Raha toa ny karatra SIM iray ampiasaina ao amin'ny modem automatique Support Assistant amin'ny alalan'ny kaonty manokana amin'ny alalan'ny antso finday Support Call Misy tranga sasany izay tsy azonao atao ny mijery taratra Tadiavo ny findainao sy ny Internet ao amin'ny MTS. Ny mpampiasa karatra SIM avy amin'ny MTS dia manana fomba maro hitadiavana ny mombamomba ny serivisy sy ny safidy mifandraika.
Ok google amin'ny ordinatera
Fantatrao ve fa alefa amin'ny ordinatera na ny solosaina finday ilay mpanentana malaza Ok Ok, na ny finday Android? Raha tsia, dia eto ambany ny famaritana ny fomba ahafahanao manangana Google ao amin'ny ordinateranao ao anatin'ny minitra vitsy monja. Raha eny, raha mitady toerana hakana fahafaham-peo Google ianao, ny valiny dia tsotra - raha manana Google Chrome ianao, dia tsy mila mandefa na inona na inona, fa raha tsy izany, alefaso ity tranonkala ity avy amin'ny tranonkalan'ny chrome ofisialy.
Ahoana ny fametrahana Flash Player ho an'ny Android
Ny iray amin'ireo olana matetika atrehin'ny mpampiasa ny fitaovana mihazakazaka Android dia ny fametrahana mpilalao flash, izay mamela ny flash amin'ny toerana samihafa. Ny fanontaniana mikasika ny toerana ahafahana miditra sy mametraka Flash Player dia niroborobo taorian'ny fanohanan'ny teknolojia nanjavona tao amin'ny Android - ankehitriny dia tsy azo atao ny mahita ny Plugin Flash ho an'ity rafitra ity ao amin'ny tranokalan'ny Adobe, ary koa ao amin'ny fivarotana Google Play, fa fomba mbola any.